Dadka Somaliland-noow dawlad baanu nahay iyo dunida la macaamili mayno kala daaya!! |
Dadka Somaliland-noow dawlad baanu nahay iyo dunida la macaamili mayno kala daaya!!
Qaaciida milatari ee Berbera laga bixiyay ,inkastoo aan ku rajawaynahay in buuq kastaaba uu leeyahay wakhtigiisa iyo xamasadiisa , wixii intaa ka danbeeyana la isla miyirsan doono ,waxkastabana ay halkoodii ku noqon doonaan.
Dawlad nimadu waa wax qaali ah, waxa aad moodaa in aynaan wali dawlad nimo faham sanayn, dawladnimadu waxa ay keeni kartaa waxkasta oo la odhan karo dadka faa’iido ayaa ugu jirta,sidoo kalana waxaa ka iman karo oo aan mararka qaar la ogayn khataro badan.
Maah maah Somaliyeed ayaa tidhahda “wax aynu qalano mindiyahana aynu qarsano” arinteenu maanta waa kaasi,dawlad ayaanu nahay aqoonsi ayaanu doonaynaa,hadana kama qayb galayno xaladaha ka jira deegaan kayaga oo gooni ayaanu ka ahanaynaa, nin durbaan tuntay ilaaq dalbay, dawlad nimo culayskeeda u yar kan aynu ka cabanayno ayaa ugu yar ,armaynu dhawnahay ,dawladnimo xaalkeedu waa khamaar.
Berberi waxa ay u jirtaa Yemen gaar ahaam magalada inoogu dhaw waa Cadan 260 klm ,balse Eritareya gaar ahaan magaala xeebeedka Assab waxa ay u jirtaa Ti’iz oo Yemen ah 176 klm ,ilaa hadana ma jirto wax dhibaato ah ee ay Eritareya kaga cabanayso dagaalka gacanka .
Anigu ma lihi waxkastaaba waa 100% waayo taas cid ogi ma jirto balse marka aan eego ama aan qiimeeyo fa’idada iyo khasaraha inaga soo gaadhi kara waxa in badan ii muuqda in ay fa’idadu badan tahay ,waa hadii heshiiska dawladu Baarlamaanka ay keentay sidiisa loogu dhaqmo.
Waxa kaloo jira in rag badan oo siyasiyiin lahi ay ku doodaan in dawlada Imaraadku ay qayb wayn ka ahayd dagaladii lagu qaaday Somaliland xiligii dawladii Kacaanka,waa run taasi cid dafiri kartaa ma jirtio,balse siyaasadu markaliya halkeeda ma fadhido waa hadhkaa labadiisa galin iyo kolba sida aad uga fa’idaysato.
Amasom waxa ay ilaaliyaan dawlada Somaliya iyo dhamaan shacbiga Somaliya oo dhan,saqiir ilaa kabiir,balse saldhigan imaraadka laga kireeyay waxa uu yahay dhul cabirkiisuna uu go’an yahay xaqna aanay u lahayn in ay kusoo xadgudbaan meel ka baxsan.